औंसीको अवसर पारेर दुर्गा अधिकारीको ‘हाइकु’ विमोचन Kasthamandap Daily
औंसीको अवसर पारेर दुर्गा अधिकारीको ‘हाइकु’ विमोचन
काठमाडौं । आज मातातिर्थ औंशी, त्यसै नै आजको दिन आमाहरुको लागि विशेष दिन । आजको विशेष दिन पारेर दुर्गा अधिकारीद्धारा लिखित ‘हाइकु’ वर्णमाला विमोचन भएको छ ।
दुर्गा अधिकारी एक सफल साहित्यकारमा दरिन्छन् । उनले थुपै कविताहरु विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुमा छपाइसकेका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । उनले विशेष गरेर ‘जन आकाश’ साप्ताहिकमा निरन्तर आफ्नो कविता प्रकाशन गरिरहेको पाइन्छ ।
आज उनिद्वारा लिखित ‘हाइकु’ विमोचन हुँदा सयौको संख्यामा आएका साहित्यकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सभापति मुरली प्रसाद ढकालको आतिथ्यमा भएको उक्त विमोचनमा प्रमुख अतिथि प्रा.डा. गार्गी शर्मा रहेका थिए भने विषेश अतिथिहरुमा डा. बम बाहादुर थापा जितालि, डा.शैलेन्दु प्रकाश नेपाल, पुर्वरथि तेजप्रकाश बानिया रहेका थिए । प्रमुख अतिथि शर्माकै हातवाट वरिष्ठ साहित्यकार पुर्व उपरथी तेजप्रकाश बानियाँ र हाइकु बर्णमालाका लेखक दुर्गा अधिकारीलाइ सम्मान गरिएको थियो ।
पुर्व उपरथी तेजप्रकाश बानियाँले समेत ‘जन आकाश’ साप्ताहिकमा आफ्नो साहित्यमा निरन्तर कलम चलाइरहेका छन् । बानियाँ एक कुशल, मिलनसार एवं आफ्नो साहित्यमा निरन्तर अडिग रहन सफल भएका एक कुशल साहित्यकारमा चिनिन्छन् ।
साथसाथै प्रमुख अतिथिकै हातवाट हाइकु वर्णमाला विमोचन गरिएको छ । उक्त हाइकु वर्णमालाका लेखक दुर्गा अधिकारीको रचनालाइ गौरी पव्लिक रिलेशन एन पव्लिकेशनले प्रकाशनमा ल्याएको हो ।
आज नै आमा विषेयक कवितामा पनि प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो झण्डै १०० भन्दा बढी कविहरुले भाग लिएका उक्त कवितामा तिलक लुइटेलको संयोजकत्वमा निर्णायक मण्डल बनाइको थियो । निर्णायक मण्डलले दिएको अङकको आधारमा सवैभन्दा उत्कुष्ट कविता वाचन गर्ने कवि गंगा आचार्यलाइ प्रथम पुरुस्कार वितरण गरिएको थियो । उहालाइ कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथिको हातवाट पुरस्कार वितरण गरिइको थियो । कार्यक्रमलाइ सम्वोधन गर्ने क्रममा प्रमुख अतिथि प्रा.डा. र्गागीले साहित्य पानी हो जीवन र जगतलाइ नभइन हुने, साहित्त्यले आशु पुच्छ, साइत्य भगवानको स्वरुप हो भन्दै आमाको महत्वलाइ समेत प्रष्ट्याउनु भएको थियो । कार्यक्रमलाइ आकर्षण वनाउन शुरु देखि अन्त्यसम्म गौरी पव्लिकेशनका प्रकाशक तथा साहित्यकार दामोदर ढकालले शैलीवद्ध ढंगवाट कार्यक्रम सफल वनाउन कार्यक्रम संञ्चालन गर्नु भएको थियो ।